Ibhola enesiqu ihlala isetyenziselwa uxinzelelo lwezivalo zebhola okanye iicvalic zebhola. Ukuqhubekeka okungaphezulu kunye nobunzima bokuqhubekeka okuphezulu, iindleko ziya kuba ngaphezulu kweebhola eziqhelekileyo. Ngamanye amaxesha ukwehlisa iindleko zokuvelisa, iziqu zinokudityaniswa ngeebhola. Amagama aphambili: Ibhola yevalve enesiqu, ibhola yesiqu, iibhola zevalve yesiqu, ibhola enesiqu. Iimpawu ezimbini ezibaluleke kakhulu kwiibhola zevalvezi kukujikeleza kunye nokugqitywa komphezulu. Ujikelezo kufuneka lube lulawulo ...
Iibhola ze-Xinzhan ziye zafakwa ngokuqhelekileyo kwiivalve zebhola kwimibhobho yenkqubo yefriji. Ukusetyenziswa kweefestile zebhola zefriji kukuya ngakumbi nangakumbi, kwaye iimfuno ziya zisiba phezulu. Ezona mpawu zibalulekileyo zeebhola zevalvezi kukujikeleza kunye nokugqitywa komphezulu. Ukujikeleza kufuneka kulawulwe ngokukodwa kwindawo ebalulekileyo yokutywina. Siyakwazi ukwenza iibhola zevalvethi ngokujikeleza okuphezulu kakhulu kunye nokunyamezelana okuphezulu komphezulu. Thina c ...
I-Xinzhan Valve Ball Co, Ltd. ijolise ekuveliseni ibhola yevalve ngesiqu ngezixhobo zokubumba ezingundoqo. Amagama aphambili: Ibhola yevalve enesiqu, ibhola yesiqu, iibhola zevalve yesiqu, ibhola enesiqu. Iimpawu zeBhola zeValve Iimpawu ezimbini ezibaluleke kakhulu kwiibhola zevalvezi kukujikeleza kunye nokugqitywa komphezulu. Ukujikeleza kufuneka kulawulwe ngokukodwa kwindawo ebalulekileyo yokutywina. Siyakwazi ukwenza iibhola zevalvethi ngokujikeleza okuphezulu kakhulu kunye nokunyamezelana okuphezulu komphezulu. Zeziphi iintlobo ...
Sphere kuthembeke semigudu yenziwe ngesinyithi coil welding isakhiwo. Oku kufanelekile kwiivalves zebhola ngoxinzelelo lwegama elingaphantsi okanye elilingana no-5.0MPA (CLASS300). Olu hlobo lomzimba wevalve lukhaphukhaphu ngokobunzima kwaye umngxunya ongaphakathi kulula ukuqhubekeka, kodwa ingqalelo ekhethekileyo kufuneka ihlawulwe kulungelelwaniso lweembambo kuyilo ukunqanda umzimba ukuba ungakhubazeki. Isinyithi solwelo esityhidiweyo ngexesha lenkqubo yokubonisa yentsimbi engenasici iya kuhamba ngokukhululekileyo. Ukuqinisekisa ...
Iibhola for Ivaluva Ball
XINZHAN ivalve IBHOLA CO., LTD. eneemfuno ezizodwa kwimveliso yeebhola zohlobo lweevelufa ezidadayo ngokwemizobo yabathengi. Isigaba sokudada sidada. Ngaphantsi kwesenzo soxinzelelo oluphakathi, inqanaba linokuvelisa ukufuduka okuthile kwaye licinezele ngokuqinileyo kwindawo yokutywina yokuphela kokuphuma ukuqinisekisa ukuba isiphelo sokuthengisa sitywiniwe. Isigaba sokudada sinesakhiwo esilula kunye nokusebenza kakuhle kokutywina, kwaye sisetyenziswa ngokubanzi kumzi mveliso. Isikhumbuzo esifudumeleyo sokuba xa ubushushu bemo ...
Iibhola zeValve zeBhola
Olona ncedo lukhulu kwibhola yevalufa yebhola kukuba ukuxhathisa kulwelo kuncinci kakhulu. Indawo yomphezulu wokutywina okhuhliweyo kwaye ukhukuliswe sisixhobo esiphakathi yeyona incinci. Umsebenzi wokutshintsha kwevalve yebhola kulula kakhulu, ulwalathiso lokuhamba oluphakathi aluthintelwanga, uxinzelelo lweliphakathi aluyi kuwela, kwaye oluphakathi aluyi kuphazamiseka. Imilo ilula kakhulu, kwaye isikali sesicelo sibanzi kakhulu ngenxa yomsebenzi waso obalaseleyo. Umgangatho webala ...
Kwibhola Valve Ball kunye Seat Set
Isinyithi kwibhola yentsimbi kunye neseti yezihlalo kubandakanya ibhola enye kunye nezihlalo ezibini zentsimbi ehleli ivalve yebhola. Sele beqhotyoshelwe kunye kwaye bavavanywa ngotywala okanye iparafini ukuze kuqinisekiswe ukuvuza okungafunekiyo okanye itywina eliqinileyo. Ezona mpawu zibalulekileyo zeebhola zevalvezi kukujikeleza kunye nokugqitywa komphezulu. Ukujikeleza kufuneka kulawulwe ngokukodwa kwindawo ebalulekileyo yokutywina. Siyakwazi ukwenza iibhola zevalvethi ngokujikeleza okuphezulu kakhulu kunye nokunyamezelana okuphezulu komphezulu. Adva ...
IiBhola zeValve eziLungisiweyo
Isikhewu esine-axis esisigxina sibizwa ngokuba sisigaba esisigxina. Ibhola esisigxina ubukhulu becala isetyenziselwa uxinzelelo oluphezulu kunye nobubanzi obukhulu. Ezona mpawu zibalulekileyo zeebhola zevalvezi kukujikeleza kunye nokugqitywa komphezulu. Ukujikeleza kufuneka kulawulwe ngokukodwa kwindawo ebalulekileyo yokutywina. Siyakwazi ukwenza iibhola zevalvethi ngokujikeleza okuphezulu kakhulu kunye nokunyamezelana okuphezulu komphezulu. Zeziphi iintlobo esinokuzenzela iibhola zevalveti Ukudada okanye i-trunnion ekhwele iibhola zevalve, eziqinileyo okanye ...
Ulenze T Uhlobo ezintathu Way Valve Iibhola
IXINZHAN ngumvelisi ophambili, umthengisi kunye nelithumela ngaphandle kwibhola yevali yendlela ezintathu. Sinoluhlu olubanzi lweendlela ezintathu zebhola zentsimbi zenziwe ngentsimbi yekhabhoni, intsimbi engenziweyo yentsimbi kunye neplate yentsimbi. Iibhola zevalve ze-Xinzhan zisetyenziswa kwiibhola ezahlukeneyo zebhola ezisetyenziswa kumacandelo e-petroleum, igesi yendalo, unyango lwamanzi, amayeza kunye neekhemikhali, ukufudumeza, njl. indlela iibhola vana umenzi, iibhola vana indlela vana ...
Amacandelo evalve asetyenziswa kwiibhola ezinkulu neziphakathi zebhola yoshishino kwimimandla yepetroleum, igesi yendalo, unyango lwamanzi, amayeza kunye nemizi-mveliso yamachiza, ukufudumeza, njl njl.Iindawo zevalve zidibene kubume, ukukhanya kubunzima, anti-static kunye isakhiwo esingatshiyo. Xa ivulwe ngokupheleleyo kwaye ivaliwe ngokupheleleyo, isithuba kunye nesihlalo sevalvethi Indawo yokutywina yevalve iyodwa ukusuka kwiphakathi, ke indawo ephakathi edlula ivelufa ngesantya esiphezulu ayizukubangela ukhukuliseko ...
Iibhola zevalve zokuhambisa amanzi zisetyenziswa kwiibhola zebhola edadayo. Ibhola ibanjwe kwindawo yokucinezelwa kwezihlalo ezibini ze-elastomeric ngokuchasene nebhola kwivelufa yebhola edadayo. Ibhola isimahla ukuba idadwe ngaphakathi komzimba wevalufa. Isiqu sevalufa yebhola edadayo idityaniswe kwislot ephezulu yebhola evumela ibhola ukuba ijikeleze ikota yokujika (iidigri ezingama-90). I-shaft ivumela inani elithile lokuhamba kwebhola eliveliswa ngcinezelo olusebenzayo ...
Iibhola zeValve zensimbi ezingenasici
Insimbi engenasici yinto eqhelekileyo ukuba isetyenziselwe iibhola zevalve zebhola. Senza uhlolo ngokungqongqo kwizinto ezingenayo ukuqinisekisa ukuba izinto zisemgangathweni. Ivalve yentsimbi eyenziwe ngentsimbi iveliswa yitekhnoloji yokuvelisa yale insimbi kunye noomatshini bokuchaneka. Imveliso inokubunjwa kwipleyiti yentsimbi engenasici (iibhola ezingenanto), okanye ibhola engenanto engenanto engenanto (iibhola eziqinileyo). Amagama angundoqo Stainless Valve Iibhola vana intsimbi vana ...
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iimveliso afakiwe - eKhaya 304 Kwaye 304l Valve Ball , Iinxalenye Valve Ball, V-Waxonxa Valve Balls nomakhi , L Type Valve Balls , L Pattern Valve Balls , Iibhola Kuba Ivaluva ,